Wararka Maanta: Isniin, July 30, 2012-Madaxweynaha Soomaaliya iyo Wafdi uu Horkacayo oo Degmada Afgooye kula kulmay Waxgaradka degmadaas
Safarka madaxweynaha uu ku tagay Afgooye oo ahaa mid saxaafadda laga qariyay ayaa waxaa ku wehlinaya wasiirrada gaashaadhigga, arrimaha gudaha, wasiirka garsoorka iyo arrimaha diinta iyo saraakiil ka tirsan kuwa ciidamada DKMG ah.
Madaxweyne Shariif ayaa ka dalbaday saraakiisha ciidamada dowladda KMG ah inay ka shaqeeyaan sidii ammaan degmada loogu soo dabbaali lahaa, isagoo si gaar ah dusha uga saaray arrintaas taliye ku xigeenka ciidamada xoogga dalka, Jen. C/kariin Yuusuf Aadan (Dhego-badan).
Sidoo kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka ogolaaday odayaasha degmada inay soo xushaan ciidammo gaar ah oo ay garanayaan si ay ammaanka u sugaan, balse wuxuu ka digay inaysan ka mid noqon Al-shabaab, isagoo ciidamadaas ugu magac-daray ciidanka ilaalada dariska oo hoostaga ciidamada nabad-sugidda.
Wasiirka garsoorka oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadka reer Afgooye looga baahan yahay inay keensadaan dad uga shaqeeya dhinaca garsoorka, isagoo xusay in garsoorka uu yahay midka kala hagi kara dadka.
Taliyaha ciidamada milateriga, Jen. C/qaadir Sheekh Cali Diini iyo abaanduulaha ciidamada xoogga, Jen. Dhego-badan oo labaduba hadlay ayaa waxay sheegeen in laga shaqeynayso sidii ammaanka lagu adkeyn lahaa.
Intii ay kulammo socdeen waxaa xabsiga loo taxaabay qaar ka mid ah saraakiishii ciidamada dowladda KMG ah ee ku sugnaa degmada Afgooye kuwaasoo laga xusay sarkaal lagu magacaabo Doodishe, iyadoo saraakiishan lagu eedeeyay inay mas'uul ka ahaayeen falal ammaan-darro oo degmada ka dhacay.
Shacabka ku nool degmada Afgooye ayaa waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay ka cabanayeen dhac ay ciidamada dowladdu u geysanayeen, iyadoo sidoo kale ay ka dhaceen degmadaas dilal loo geystay dad rayid ah oo ay ku jireen abbe iyo wiil uu dhalay.
Degmada Afgooye oo 30-km ka xigta Muqdisho dhinaca waqooyi-galbeed ayay bishii May ee sannadkan kala wareegeen ciidamada dowladda KMG ah iyo kuwa AMISOM xoogagga Al-shabaab oo muddo sannado ah gacanta ku hayay.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in dhowr weerar ay dhaceen intii madaxweynaha iyo wafdigiisa ay ku socdeen waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, kuwaasoo la sheegay inay soo qaadayeen xoogag taabacsan Al-shabaab, balse aan geysan wax khasaare ah.
Socdaalkan ayaa wuxuu noqonayaa kii saddexaad oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku tago degmada Afgooye tan iyo markii Xarakada Al-shabaab laga qabsaday oo laga joogo laba bilood.